Uma uhlala endaweni ebandayo, akungabazeki ukuthi amabhontshisi noma izigqoko ezilukiwe ziyingxenye ebalulekile yezingubo zakho zasebusika. Kepha noma ngabe ufuna ukufaka isigqoko esifudumele noma ukufaka umqondo wemfashini, kulo nyaka (kanye neminyaka embalwa edlule) kubonakala ngathi uthwele isigqoko. ICarhartt Men's Acrylic Watch Cap iyi ...
Abaphenyi baseHarvard University bathole ukuthi abantu abaphumelelayo bavame ukukhombisa ukuthambekela ekungalandeli isiko. Isibonelo, ezweni lokuhweba okunzima, abantu bavame ukugqoka amasokisi akhanyayo. Ucwaningo olubizwa nge- "Red Sneaker Effect" luhlola ukusabela kwabantu emazingeni aphansi ...